समाचार Archives – healthykhabar.com
कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा भेटियो , तीन जनामा संक्रमण (विज्ञप्ति सहित)
काठमाडौं,५ पुस। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति फेला परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले एक बक्तब्य जारी गर्दै नेपालमा बेलायतबाट आएका ३ जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २८ बर्षिया महिला, ६७ र ३२ बर्षिय पुरुषमा नयाँ प्रजातिको भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टी भएको बताउनुभयो । कोरोनाको नयाँ प्रजातिको उद्गम्स्थल बेलायतबाट केहि दिन अघि नेपाल फर्किकएकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानीमा राखी नुमना परीक्षण गर्दा ३ वटा नमुनामा नेगेटिभ देखिएपछि नयाँ प्रजातिका् संक्रमण भए नभएको पुष्टि गर्न पुस २७ गते विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा हङकङ प्रयोगशाला पठाइएको थियो । प्रवक्ता गौतमले प्रयोगशालाबाट ३ जनामा नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी आजै मात्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।संक्रमण पुष्टि भएका तीन जना मध्ये २८ बर्षिया महिला र ३२ बर्षीय पुरुषको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको र ६७ बर्षिय पुरुष पोजेटिभ नै रहेपनि लक्षण नदेखिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सहमति,आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
काठमाडौं,४ पुस। आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसंगै समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको छ। सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.रोशन पोखरेलको स‌योजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियाे । जसमा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम र प्रशासन प्रमुख दामोदर रेग्मी रहनुभएको छ । यसैगरी सरकारसँग वार्ता गर्न आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक एवं नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियाे । समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे, उज्वलकुमार शर्मा, राजेन्द्र खड्का, माइकल देवकोटा, कृष्णमान शाक्य, दाताराम अधिकारी र लता महत रहनुभएको थियो । यस्तो छ सम्झौतापत्र : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्ता समिति र स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु बिच भएको सम्झौता पत्र १. कोभिड लगायत अन्य जटिल रोगको उपचारका लागी निम्नानुसार गर्ने । क बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारी…
काठमाडौं ४ पुस। औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. अश्फाक शेखको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। विभागका पूर्वमहानिर्देशक पान बहादुर क्षत्रीले डा. शेखले निधन भएको पुष्ठि गर्नुभयो । विभागमा वि.सं. २०४६ सालभन्दा अगाडीदेखि २०५७ सालमम्म शेख महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो।
फाइजरको खोप लगाएका २९ जनाको मृत्यु
काठमाडौ,४ पुस । नर्वेमा कोरोनाभाइरसविरुद्ध भ्याक्सिन लगाएका २९ जना वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएको खबर सावर्जनिक भएको छ। फाइजरले बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको कोरोना भ्याक्सिन लगाएका ती वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएको बताइएको छ। मृतक सबै ७५ वर्षभन्दा माथि छन्। पहिलो चरणमा ८५ वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरुलाई भने भ्याक्सिन दिइएको छैन। ती सबै वृद्धवृद्धामा पहिलेदेखि मुटु, मिर्गौलामा इन्फेक्सनजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या थियो। उनीहरुलाई कोरोना भ्याक्सिनको पहिलो डोज दिइएको थियो । नर्वेमा गत जनवरी १ देखि कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा त्यहाँ उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरुलाई भ्याक्सिन दिने काम भइरहेको छ। नर्वेमा हालसम्म ४२ हजार मानिसले कोरोना भ्याक्सिनको पहिलो डोज लिइसकेका छन् । तीमध्ये २३ जनाको भ्याक्सिनको साइडइफेक्टका कारण मृत्यु भएको हुन नर्वेका स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउँछन्। कोरोना खोप लगाएकालाई झापापखाला र श्वासप्रश्वासजस्ता समस्या देखिनुमा साइडइफेक्ट नै प्रमुख कारण हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ। प्रारम्भिक नतिजाबाट फाइजरको भ्याक्सिनमाथि शंका गरिहाल्ने अवस्था नरहेको नर्वेजियन मेडिसिन एजेन्सीले जनाएको छ। यद्यपि अहिले देखिएको नतिजालाई नकार्न नसकिने…
भारतमा कोरोनाबिरुद्धको खोप अभियान शुरु
नयाँ दिल्ली, ३ माघ । भारतमा कोरोनाबिरुद्धको खोप अभियान शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार विहान १० : ३० बजे भिडियो कन्फ्रेन्सिङको माध्यमद्धारा अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले कोरोनाबिरुद्धको खोप निकै छोटो समयमा आएको र देशले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान शुरु गरेको भन्दै देशवासीहरुलाई बधाई दिएका छन् । उनले पहिलो चरणमा ३ करोड जनतालाई खोप दिने र दोस्रो चरणमा ३० करोड बढीलाई खोप दिने योजना बनाएको सुनाए । उनले यो अभियान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान भएको समेत दावी गरे । भारतमा आजबाट सबै २९ राज्य र केन्द्रद्धारा शासित प्रदेशहरुमा अभियान शुरु हुँदैछ । त्यसका लागि ३ हजार ६ वटा क्षेत्र तोकिएको छ । पहिलो चरणमा हेल्थवर्कर र प्रन्टलाइन वर्करलाई खोप दिइने बताइएको छ । पहिलो दिन आज हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा १ सय जनामा यो खोप लगाइने छ । अभियानमा आज पहिलो दिन देशभरका ३ लाख १५ हजार ३७ जनामा खोप लगाइने भएको छ…
मुख स्वस्थ रहे अधिकांश रोगबाट बचिन्छ
काठमाडौँ, ३ माघ । तपाइँ मुख स्वास्थ्यबारे कत्तिको सजग हुनुहुन्छ । ख्याल गर्नुस् है मानव शरीरभित्र करीब ९० प्रतिशत रोग मुख स्वास्थ्य अर्थात् दाँतजन्य समस्याका कारण हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । मुख स्वास्थ्यको संवेदनशील दाँतको समस्यालाई सामान्य ठानेर हेलचेक्र्याँइ गरिए यसले अरु जटिल प्रकृतिका रोग निम्त्याउने गरेको छ । त्यसैले दाँतको उपचार र हेरचाहमा ख्याल गरेको खण्डमा अधिकांश रोग लाग्नबाटै बच्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ । दाँतको उपचारसम्बन्धी सरकारी तथा निजीस्तरमा खुलेका थुपै्र स्वास्थ्य संस्था र निकाय छन् । तर दाँत उपचारका लागि कहलिएको निजी क्षेत्रको ॐ समाज डेन्टल हस्पिटलको गुणस्तरीय सेवा र असहज परिस्थितिमा पनि गरिने उपचारले अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी र सान्दर्भिक बनाएको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड प्रत्यक्ष मुख स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि हो । महामारी सर्ने डरले अहिले पनि धेरै दाँतका बिरामी उपचारका लागि पुग्न सकेका छैनन् । कोभिड मुख, नाँक र आँखाबाट सर्ने भएकाले पनि दाँतको समस्या आइहाले पनि कोभिड सर्ने डरले अहिले पनि धेरै बिरामी…
कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन स्वीकृत
काठमाडौँ,३ माघ । नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा उत्पादित ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो । विभागले ‘सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया’ले उत्पादन गरिरहेको ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको लागि स–सर्त अनुमति दिने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘कोभिसिल्ड’ बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका मिलेर विकास गरिएको खोप हो । भारतले पनि यो खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिइसकेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले दुई दिनअघि आपत्कालीन अनुमतिका लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । पुस २० गते सरकारले खोप ल्याउनका लागि चारवटा ‘मोडालिटी’ बनाएको छ, महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो । महानिर्देशक भट्टराईले अब खोप ल्याउन बाटो खुलेको बताउनुभयो । सरकारले यसअघि नै पहिलो चरणमा एक करोड २० लाख मानिसलाई प्राथमिकताको आधारमा खोप दिनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी, वृद्धवृद्धा, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी पहिलो नम्बरमा पर्छन् । पहिलो चरणमा ३० प्रतिशतलाई खोप दिने सरकारी तयारी छ । महानिर्देशक भट्टराईले लामो समयपछिको प्रयास…
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सीटी स्क्यान मेसिन संचालनमा
दाङ,१ माघ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक १ सय २८ स्लाइसको सीटीस्क्यान मेसिन संचालनमा आएको छ । सामाजिक अभियन्ता, नागरिक अगुवा एवं नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले सीटीस्क्यान मेसिनको उद्घाटन गर्नु भएको हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपती प्रा.डा. संगीता भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा रेडियोलोजिष्ट बम बिसिले सीटी स्क्यान मेसिनको बारेमा जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रतिष्ठानका डिन बसन्त लामिछानेले सीटी स्क्यानका लागि बुटवल, काठमाडौ, नेपालगंञ्ज जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
सुस्वास्थ्य हस्पिटलमा १० हजार बिरामीको उपचार,हस्पिटल छैटौँ वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं,१ माघ । प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा सेवा दिदै आएको सुस्वास्थ्य हस्पिटलले १० हजार भन्दा धेरै बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिएको छ। अस्पतालको छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा अस्पतालका अध्यक्ष सुदर्शन बस्नेतले हालसम्म १० हजारभन्दा बढीको उपचार गरिएको जानकारी दिदै प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । सुस्वास्थ्य हस्पिटलमा नसा च्यापिएका, हड्डी खिइएका, हाडजोर्नी समस्या भएका, पक्षघात भएका, माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेसन आदीका बिरामी आउने गरेका छन् । अध्यक्ष बस्नेतले नसा च्यापिएका बिरामीको उपचारमा हस्पिटलले ९० प्रतिशत सफलता पाएको बताउनुभयो । उहाँले हस्पिटलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै विभिन्न स्थानमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । अस्पतालले कोरोना महामारीका कारण हस्पिटल प्रांगणमा सिमीत कर्मचारी र बिरामीबीच वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । हस्पिटलका अध्यक्ष बस्नेतले आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा शाखा स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्ने बताउनुभयो ।
बिहीवार ४०३ जना संक्रमित थपिए, ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बिहिवार नेपालमा थप ४०३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । याे सँगै नेपालमा कुल संक्रमितकाे संख्या दुई लाख ६६ हजार ५४५ पुगेकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ४०५ जना निको भएका छन् । हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ४४२६ रहेको छ । हालसम्म कोरोना निको हुनेको संख्या दुई लाख ६० हजार १७७ पुगेको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जना संक्रमितकाे मृत्यु भएको छ । यो संगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या १९४३ पुगेको छ ।
कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न आवेदन माग
काठमाडौं,२९ पुस । औषधि व्यवस्था विभागले कोभिड-१९ विरूद्ध खोप आयात गर्न दर्ता अनुमति पत्रका लागि आवेदन माग गरेको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड-१९ को खोप प्राप्त गर्न चाहने उत्पादक वा आधिकारिक आयातकर्ताले आवश्यक कागजातसहितको विवरण खुलाई आपतकालिन प्रयोगको दर्ता अनुमतिका लागि आवेदन पेस गर्न सुचित गरेको छ। विभागले कोभिड-१९ खोपको आपतकालिन प्रयोगका लागि दर्ता आवेदन दिँदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको औषधि वा ‘खोपको आपतकालिन प्रयोग सम्बन्धि संहिता, २०७७ र कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धी’ अवधारणपत्रलाई आधार मान्ने जनाएको छ।
शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालले कोरोना बाहेकका बिरामीको उपचार सुरु गर्ने
काठमाडौँ,२९ पुस। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले कोरोना बाहेकका बिरामी (नन कोभिड)को पनि उपचार गर्ने भएको छ। अस्पतालले आउँदो आइतबार देखि नन कोभिड सेवा संचालन गर्ने जानकारी दिएको छ। अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै आउँदो आइतबार देखि नन कोभिड सेवा संचालन गर्ने जनाएको हो। सो अस्पतालले कोरोना संक्रमितको चाप वृद्धि भएसँगै केहि समय देखि कोरोना बिरामीको मात्रै उपचार गर्दै आएको थियो।
थप ४४५ जनामा कोरोना संक्रमण,पाँच जनाको मृत्यु
काठमाडौं,२९ पुस। बुधबार नेपालमा ४४५ जना ब्यक्ति कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार चार हजार १५४ जनामा पिसिआर परीक्षण गर्दा ४४५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो। हालसम्म १९ लाख ९७ हजार ९ जनामा पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। जसमा २ लाख ६६ हजार १ सय ४३ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको छ। यसैबीच गत २४ घण्टामा ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या १ हजार ९ सय ३७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कलैया अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, कोरोना भत्ता नपाएको गुनासो
बारा,२९ पुस। कोरोनाका बिरामीको उपचार गरेबापतको जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै कलैया अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलित भएका छन्। जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमितको उपचार गरेर पनि कोरोना भत्ता नदिएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका हुन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले मंगलबारदेखि अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी अस्पतालमै धर्ना सुरु गरेका छन्। आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन गरी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता भने उपलब्ध नगराएको उनीहरुको आरोप छ। अस्पतालका आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापक सत्यन्द्र कुमार यादवले गत वर्ष चैत महिनादेखि कात्तिक मसान्तसम्मको जोखिम भत्ता पाउनुपर्नेमा हाल सम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा कलैया अस्पतालमा एक सय बेडको आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन गरिएको थियोे ।
काठमाडौं,२९ पुस। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोप खरिद गर्नका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गर्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज गोरखापत्र दैनिकमा एक सूचना प्रकाशित गरि खोप कोषमा सहयोग गर्न दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्थालगायतसँग सहयोग मागेको छ । निकट भविष्यमा खोप आउने सम्भावना प्रवल रहेको र लक्षित समहहरुलाई निःशुल्क खोप उपलव्ध गराउन आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट आकस्मिक प्रयोगका लागि स्विकृती प्राप्त भएको खोप खरिद गरि लक्षित समूहहरुलाई निःशुल्क खोप उपलव्ध गराउन ठुलो रकमको आवश्यक पर्ने भएकाले कोषमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको सूचनामा भनिएको छ । कोषमा जम्मा हुने रकमको परिचालन र खर्चको समीक्षा गरिने र कोषको आय व्यव लेखा प्रणालि मार्फत राखिनुका साथै लेखा परीक्षण गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,टेकुमा १७००१००१०२०६०००० खाता नम्वरमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद‌्द्वारा लाइसेन्स पाउनेहरूको सूची सार्वजनिक
काठमाडौं,२८ पुस। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले विभिन्न विषयको लाइसेन्स पाउनेहरूको सूची निकालेको छ। परिषद्ले विभिन्न विधाका स्वास्थ्य व्यवसायीको लाइसेन्स सूची सार्वजनिक गरेको हो। मंगलबार परिषद्ले मंसिर २८ को निर्णयअनुसार प्रमाणपत्र जारी गरेको जनाएको छ।
क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत नर्स पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला
चितवन,२८ पुस । भरतपुस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स लक्ष्मी जोशी मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको छ। २३ वर्षीया जोशी चितनवनको कृष्णनगरमा आफ्नै डेरामा सोमबार झुण्डिएको अवस्थामा फेला फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। चितवन प्रहरीका अनुसार सोमबार ३ बजे मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको हो। ‘सोमबार १ बजेको ड्युटी आउनुपर्नेमा तीन बजे सम्म पनि नआएपछि साथीभाइले खोजी गर्दा कोठामा पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको हो। मृत्युको कारण भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। नर्स जोशी विगत डेढ वर्षदेखि अंकोलोजी युनिटमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालगन्ज,२८ पुस। शुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले स्तन क्यान्सरको सर्जरी गरेको छ। अस्पतालमा पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया भएको हो। अस्पताल सञ्चालन भएको ४ वर्षपछि अस्पतालले पहिलो पल्ट स्तन क्यान्सरको सर्जरी गरेको हो।अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण आचार्यले कालिकोटकी ६८ वर्षीया लक्ष्मी शाहीको सर्जरी गरिएको जानकारी दिनुभयो। डा. कृष्ण आचार्य, कन्सल्टेन्ट सर्जन डाक्टर प्रबिन गुप्ता र नर्सिङ अधिकृत रन्जिता ढुंगानासहितको टिमले स्तन क्यान्सर भएकी ती महिलाको एक घण्टा लगाएर सर्जरी गरेको हो। निजी अस्पतालले स्तन क्यान्सरको लागि करिब ५० लाख शुल्क लाग्ने बताएपछि शाही उपचारका लागि क्यान्सर अस्पताल खजुरामा आउनुभएको थियो। क्यान्सर अस्पतालले १० हजार मात्र शुल्क लिएर स्तन क्यान्सरको सर्जरी गरेको हो। क्यान्सरका शंकास्पद बिरामीहरूको बायस्पी चेक जाँचका लागि चितवनको भरतपुर या भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पठाउनु पर्ने अवस्था कायमै रहेको छ।
स्वास्थ्य तर्फ सचिवको रिक्त पद छिट्टै पूर्ति हुने
काठमाडौं,२७ पुस। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्त रहेको सचिव पद चाँडै पूर्ति गरिने बताउनुभएको छ। मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले रिक्त रहेको स्वास्थ्य सचिवको पदमा नियुक्त गर्न सरकार सकारात्मक छरहेकोे र त्यही अनुसार रिक्त पदमा छिटै सचिव नियुक्त हुने बताउनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले सचिबका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने र छिटै नियुक्त गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो। मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको पद मध्ये हाल एक जना प्रशासन तर्फका मात्र सचिव हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका स्वास्थ्य सचिवको पद दुई वर्षदेखि रिक्त छ।
पाँच हजार ३०९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४८८ जना संक्रमित,१० जनाको मृत्यु
काठमाडौँ,पुस २७ गते । नेपालमा सोमबार थप ४८८ जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख ६५ हजार २६८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या चार हजार ३७३ रहेको छ भने क्वारेनटाईनमा २३७ जना रहेका छन् । यस्तै विभिन्न अस्पतालको आइसीयूमा १६३ र भेन्टीलेटरमा ३७ जना उपचाररत छन् । यस्तै सोमबार देशभरबाट थप ५२७ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । यो संगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको कुल संख्या दुई लाख ५८ हजार ९६८ पुगेको छ । गत चौबीस घण्टामा बिभिन्न प्रयोगशालामा पाँच हजार ३०९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । हालसम्म नेपालमा कुल १९ लाख ८७ हजार ५५५ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार ९२७ पुगेको छ । यस्तै…